अक्टुबर मा फ्लोरन्स भ्रमण गर्नुहोस् यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | Florencia, हाम्रो बारेमा
अक्टुबर इटाली यात्रा गर्न को लागी एक शानदार महिना हो ठिक छ, यो अझै तातो छ र यो वास्तवमै गर्मीका दिनहरू हुन सक्छ। यो सत्य हो कि यसले वर्षा पनि गर्न सक्दछ तर भाग्यले तिनीहरू वर्षा हुन्छ वा संक्षिप्त आँधीबेहरी हुन् र तिनीहरू के गर्छन् परिदृश्यलाई पोलिश गर्दछ।
एउटा उत्कृष्ट इटालियन गन्तव्य हो Florencia र यदि तपाइँ यस महिना देख्नको लागि यात्रा गर्नुहुन्छ, शहरले तपाइँलाई खुला हातले स्वागत गर्दछ, समाचार, प्रदर्शनी, रेस्टुरेन्टयो पहिलो वर्ग हो, र यदि तपाईं कारसँग हुनुहुन्छ र तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि तपाईं फ्लोरेन्टाइन केन्द्रमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ एक नयाँ छ सार्वजनिक पार्कि नजिक!
1 फ्लोरेन्स मा घटनाहरू
2 कार द्वारा फ्लोरेन्स वरिपरि पुग्दै
फ्लोरेन्स मा घटनाहरू
अक्टुबर धेरै गतिविधिहरूको साथ एक महिना हो। यस अक्टोबरमा छिट्टै सुरू हुन्छ, त्यो भनेको अक्टुबरको तेस्रो सप्ताहन्तमा हुन्छ, हुन्छ फोर्ट्ज्जा दा बासो प्राचीन वस्तुहरू मेला। यो वास्तवमै वरिपरि हिड्ने, ब्राउज गर्ने र खरीद गर्ने राम्रो अवसर हो यदि हामी लगानी गर्न इच्छुक छौं भने।
यदि तपाईंलाई आइतवार प्वाइ बजारको यो लहर मनपर्‍यो भने त्यहाँ छ लार्गो पिट्रो अन्निगोनीमा फ्ली मार्केट (बजार अधिक जानकारी को लागी, अक्टुबर को चौथा आइतवार आयोजित छ)। त्यहाँ क्याफेहरू छन् त्यसैले तपाईं ग्यास्ट्रोनोमीलाई किनमेल गर्न सक्नुहुनेछ र कपडा मात्र होइन किताब, रेकर्ड, फर्निचर, कला र अधिक।
खानाको कुरा गर्दा, इटालियन टस्कनी चेस्टनटको भूमि हो र अक्टोबर 8, १ 15, २२ र २ the मा वार्षिक Marradi चेस्टनट महोत्सव, Apennines मा एक पहाडी गाउँ।
त्यो चाड मुगेलो गाउँमा मिल्छ, यो स्थानको मूलको पदनामको साथ यसको चेस्टनटको गुणस्तरको लागि परिचित छ। त्यहाँ पुग्न, उत्तम चीज भनेको पिस्टोइयाबाट छुट्ने स्टीम ट्रेनमा उफ्रनु हो, प्रोटो, फ्लोरेन्समा रोकिन्छ (जहाँ तपाईं पुग्न सक्नुहुनेछ) र पोन्टासिभ बोर्गो सान लोरेन्जोमा ड्याकन्ट गर्न। यहाँ तपाईं पुरानो ट्रेन बाट पुरानो ट्रेन मा परिवर्तन र पहिलो हात चेस्टनट फसल चिन्न।
चेस्टनट बाहेक त्यहाँ छन् ट्रफल्स दृष्टिमा र अक्टोबर २१, २ 21 र २ the मा टार्टुफेस्टा, मोन्टाइओनमा। मोन्टाइओनको ऐतिहासिक केन्द्रमा, जैतूनको तेल, चेस्टनट, चीज र महको साथ मिसाइएका ऐतिहासिक केन्द्रमा त्यहाँ थुप्रै किसिमका ट्रफल्ससहित थुप्रै स्टोलहरू छन्। साथै truffles वरिपरि अक्टुबर को अन्तिम सप्ताहन्त छ टार्टुफो बियान्को ई नीरो, Mugello मा। यो उत्सव कालो ट्रफलमा आधारित छ र बच्चाहरूले शहरको ऐतिहासिक केन्द्रमा वितरित ट्रफल्स संकलन गर्न सक्दछन्।
फ्लोरेन्स नजिकै अर्को चाड हो सेर्टाल्डोमा पोर्सिनी मशरूम महोत्सव। यो धेरै सजिलो आउँछ र तपाईं पोर्सिनी मशरूमको साथ टस्कन गोमांसको प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाड अक्टुबरमा हरेक हप्ता हुन्छ र नोभेम्बर until सम्म रहन्छ। अक्टुबर २० मा, अर्कोतर्फ, मा पियाजा सान्ता क्रोस तपाईं स्थानीय सफाई: को प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ बफला, मोजारेलाघटनामा सग्रा डेला बुफला।
अक्टुबर फ्लोरेन्स मा मोजार्ट को महिना पनि हो र उद्धरण अति उत्तम छ पिट्टी प्यालेस। चक्र कुल months महिनासम्म रहन्छ, अक्टुबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर, र तपाईंले आफूलाई खोजिरहनु भएको सांगीतिक स्वाद दिनको लागि तपाईं अग्रिम टिकट आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। मोजाटको संगीत अद्भुत छ र अझ बढि यो आरानोको अर्को छेउमा रहेको यो महल सेटिंगमा छ।
अक्टुबर को महीना भर मा मेडीसी को बारे मा एक शानदार प्रस्तुति छ: मेडी राजवंश, सम्पूर्ण परिवारको बारेमा अंग्रेजीमा एक शो: धन, शक्ति, हत्या, षडयन्त्र। हुन्छ सन्तको कन्भेन्ट भित्र 'ओनोफ्रियो डेल मोनाचे डि फोलिग्नो, सानो सानो बारोक चर्च भित्र, र जोड्छ एक घण्टा लामो हुन्छ थियेटर, हास्य र प्रत्यक्ष संगीत। यो मेडिसि ईतिहासको दृष्टिकोणको रूपमा महान छ पुस्तक इतिहासहरूमा गए बिना।
यस बर्ष, यसका अतिरिक्त, एक कलाकार शो द्वारा प्रेरित गहनाको संग्रह सिर्जना गरेको छ, उनको फ्लोरेन्टाइन स्टुडियोमा हस्तनिर्मित र त्यो मात्र यहाँ किन्न सकिन्छ। राम्रो मेमोरी, यदि तपाईं मलाई सोध्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम जूनदेखि नोभेम्बरसम्म प्रत्येक दिन हो (र वर्षको बाँकी दिनहरू), साँझ7बजे Vía Faenza,। 48 मा। टिकटको लागत e० युरो छs.
अर्को सिफारिस गरिएको घटना हो फ्लोरेन्समा तातो हवाको बेलुनमा उडेर फेस्टिवल डेल मolf्गोल्फिएरमा अक्टोबर २ and र २ and र नोभेम्बरमा अर्को हप्ता हुन्छ।
कार द्वारा फ्लोरेन्स वरिपरि पुग्दै
हामीलाई पहिले नै थाहा छ कि फ्लोरेन्सको केन्द्रमा कारबाट यात्रा गर्न सम्भव छैन, केवल स्थानीय ट्याक्सीहरू र बसहरूले यसलाई गर्न सक्दछन्। तसर्थ, यदि तपाईं ट्रेन द्वारा आइपुग्नु भएन किनभने तपाईंले स्वतन्त्र रूपमा कार भाडामा लिनुभयो भने बाहेक अरू विकल्प छैन ऐतिहासिक शहर बाहिर पार्क.
शुभ समाचार यो छ कि जुन जूनदेखि पार्क गर्न अर्को विकल्प छ। मात्र Scandicci को शहर बाहिर एक छ कार र बस को लागी विशाल पार्किंग que यसलाई भिला कोस्टानजा भनिन्छ, A1 बन्द, मोटरवे। यहाँ तपाईं पार्क र फ्लोरन्स प्रवेश गर्न ट्राम लिन सक्नुहुन्छ केवल आधा घण्टा यात्रा पछि। यो ट्राम दिन भर हरेक तीन देखि चार मिनेट प्रस्थान गर्दछ।
पार्कि भुक्तान गरिएको छ र तपाइँ सही A1 मोटरवेको फायरन्ज-स्कान्डिचि र फायरन्ज-इम्प्रुनेता बीचमा पाउनुहुन्छ। यो स्पष्ट रूपमा देख्न सकिने संकेत छ। तपाईंलाई एक स्वचालित टिकट दिइन्छ र जब तपाईं फर्कनुहुन्छ, जब तपाईं कार लिनुहुन्छ, तपाईं प्रवासको लागि तिर्नुहुन्छ। साइटसँग 505०24 कारहरूको क्षमता छ र हप्ताको हरेक दिन २ XNUMX घण्टा खुला रहन्छ। तपाईं पार्क गर्न सक्नुहुन्छ मोटरहोमहरू र कारवांहरु तर त्यहाँ बिजुली वा पानी सेवा छैन। न्यूनतम रहनु आधा घण्टा हो, पहिलो घण्टाको लागत 1 यूरो, चार घण्टाको लागि दुई, आठ घण्टाको लागि चार र सम्पूर्ण दिनको लागि सात।
त्यहाँ शौचालयहरू, एक टुरिस्ट अफिस र क्याफेटेरिया छन् जुन स्थानीय उत्पादनहरू बेच्छ। तिनीहरू राम्रा मूल्य हुन् तर यदि तपाईं केहि भुक्तानी गर्न चाहानुहुन्न भने तपाईले एउटा खोज्नु पर्छ नि: शुल्क पार्कि। भाग्यवश फ्लोरेन्सको बाहिरी इलाकामा चारवटा छन्: पिज्जाले माइकल एन्जेलो, पोन्टे ए ग्रीभ, फायरन्जे सर्तोसा र ग्यालुजो। कुनै पनि बन्द हुँदैन। यदि तपाईं यसलाई दिनभर छोड्दै हुनुहुन्छ भने, पहिलो सुविधाजनक छ र यदि तपाईं रातमा यसलाई छोड्दै हुनुहुन्छ भने, दोस्रो सुविधाजनक छ किनकि यसको ट्राम र फ्लोरेन्टाइन केन्द्रसँग राम्रो सम्बन्ध छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » Florencia » अक्टुबरमा फ्लोरेन्स भ्रमण गर्नुहोस्
Carmen Plandiura Golobart भन्यो
मँ उनीहरूलाई मिलाएको यात्राको बारेमा र उनीहरूमा गर्न सकिने र भेट्न सक्ने सबै चीजको बारेमा जानकारी पठाउन चाहन्छु। धन्यबाद
Carmen Plandiura Golobart लाई जवाफ दिनुहोस्